Super Sirivha Haze XTRM mbeu | MyWeedSeeds.com
Super Sirivha Haze XTRM mbanje inoyambuka yakachena Haze sativa ine Skunk #One neNorthern Light mbanje dzinonetsa mukuedza kwakaringana kuchengetedza sativa cerebral yakakwirira uku ichivandudza hunhu hwayo. Super Sirivha Haze XTRM inobatsira kubva kune yake isiri-yakakosha indica genetics kupedzisa nekukurumidza uye kuburitsa gohwo repamusoro kupfuura iwe zvaunotarisira kubva kune sativa. Super Sirivha Haze XTRM inogona kurimwa panze kana mukati. Iye chirimwa chipfupi, asi nekuda kwekuwanda kwake kunogadzira goho rinonakidza rine yakakwira THC zvemukati. Super Sirivha Haze XTRM inogadzira yakakwira ichokwadi kune yake sativa mubereki - inofadza, inoyerera sativa mhedzisiro. Utsi hwake hunoita kuti afunge uye asimudzirwe mweya uyo unoshandiswa nemazvo pakurapa.
Super Sirivha Haze XTRM Mbeu dzevakadzi